Basikety – «CCCOI 2016» : resin’ny JEA ny Iloni Mayotte | NewsMada
Basikety – «CCCOI 2016» : resin’ny JEA ny Iloni Mayotte
Tsy misy manana olana ny ekipa malagasy vehivavy, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI 2016), taranja basikety. Samy tafita amin’ny manasa-dalana manko ireo ekipa telo, misolotena ny Malagasy
Samy manohy ny lalany any amin’ny manasa-dalana, ny JEA sy ny Fandrefiala ary ny MB2All, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina, taranja basikety (CCCOI). Fihaonana tanterahina any Antsiranana.
Lalao tokana ihany sisa atao anio, izay tsy hampiova na inona na inona dia ny fihaonan’ny Iloni avy any Mayotte sy ny MB2All. Raha ny marina, tokony natao ny talata lasa teo io lalao io saingy noho ny tsy fahavononan-dry zareo Mahorey, dia nahemotra amin’ity anio ity, izany.
Miato ary miala sasatra ireo ekipa hafa, mialoha ny hidirana amin’ny manasa-dalana, rahampitso asabotsy.
Raha ny voka-dalao, teo amin’ny andro fahefatra natao omaly, nomontsanin’ny JEA Vakinankaratra, tamin’ny isa mavesatra 110 noho 54 ry zareo Mahorezy. Tsy niady ny lalao satria nanjaka tokana ny mpilalao malagasy, izay hita fa tena ambony na teo amin’ny tanjaka na teo amin’ny taktika sy ny teknikan’ny mpilalao. Nitarika an’isa hatrany ny JEA, notarihin-dry Olivia sy Nambinina, nandritra ireo tapa-potoana efatra nilalaovana.
20 noho 13 teo amin’ny 10 mn voalohany avy eo 25 noho 14 ary 28 noho 15. Anisan’ny tafita ihany koa ny MB2 All sy ny Fandrefiala.
Eo amin’ny lehilahy, niala an-daharana ny Ushindzi, avy any Kaomoro tao amin’ny vondrona “B”. Tsy misy afa-tsy ny St Pierre avy any La Réunion sy ny Vautour Mayotte izany sisa mifaninana.
Samy tafita amin’ny manasa-dalana avokoa, araka izany, ireo ekipa roa ireo. Na izany aza anefa, ry zareo Reonioney no mitana ny laharana voalohany, taorian’ny fifanintsanana
Ho an’ny ekipa malagasy ahitana ny Zandary sy ny Ascut indray, samy manohy ny lalany ihany koa ny roa tonta.